MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ...
Posted by MgHla at 9:42 am
http://stevenalexand.blogspot.com/ ပါ... သူက ဘယ်သူလဲဆိုတော့ ခေတ်သစ် ယုန်နှင့်လိပ် ပုံပြင်၊ မြန်မာရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုပြီးရလာတဲ့ ဗဟုသုတ ၁၀၀ တို့ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ Kalvin ရဲ့ ညီအရင်းပါ... ဓာတ်ပုံတွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ရေးသားနေတဲ့ စတီဗင်ရဲ့ ဘလော့ကို အလည်မရောက်ဖူးသေးဘူး ဆိုရင် သွားလည်လိုက်ကြပါဦး...
http://uhteik.blogspot.com/ ဒီဘလော့ ပိုင်ရှင်ကတော့... ဖိုရမ်လောက၊ GTalk လောက ကနေ နယ်မြေချဲ့လာတဲ့ မန္တလေး သတင်းစာလောက က ဦးထိပ် (ခ) နွေမျိုးနွယ်လို့ခေါ်တဲ့ ကျတော်ရဲ့ ဘော်ဒါကြီး ရေးတာပါ...
မြန်မာနာမည် လှလှလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ၊ ကွန်ပျူတာ ဆရာ၊ ပရဟိတ အလုပ်များလုပ်နေသူ ကိုဘဦး ရဲ့ ဘလော့ပါ... http://mgbaoo-mandalay.blogspot.com/
မော်ဒယ် ခေတ်တစ်ခေတ်ကို ထူထောင်မယ့် ကိုနေကြီးပါ... http://konaygyi.blogspot.com/
ဒါလည်း မန်းလေးသားလို့ ဆိုလာသူ ဝေမြင့်မော်ရဲ့ blog ပါ... http://www.waimyintmaw.blogspot.com/
My Label: Myanmar Blogger, Links
Labels: Links, Myanmar Blogger
Chan Mya Soe said...
ရုပ်ရှင်ဟာသတွေက အဲလူကြီးရေးတာကိုး။ အခုမှပဲ သိတော့တယ်။ ရေးလည်းရေးတတ်ပါ့
အစ်ကိုရေ ... အစ်ကိုက မန္တလေးကဆိုလို့ မန်းသင်္ကြန်အကြောင်း ဖတ်ချင်လို့ ရေးပေးပါလို့ ပြောမလို့ပဲ။ အစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ Blog တွေဝင်ကြည့်တော့မှ မန်းသင်္ကြန်အကြောင်း တကယ့်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးထားတာတွေ့တယ်။ အပူမကပ်ရတော့ဘူးပေါ့။ ကျေးဇူးပါ။
Dear ko mghal,
May i know how to use myanmar font on blogger.
hey why didn't you advertise my blog as well. I am also from mdy. used to live in aungdawmu. one of my houses was on 73rd and 37th street. sold it.